Alaabada Alaab-qeybiyeyaasha iyo Warshad - Soosaarayaasha Alaabada Shiinaha
Xadka hadda jira
Xadka hadda jira waxaa iska leh aagga qaybaha korantada, waa aalad gaar ah oo loo adeegsado in lagu xaddido xilligan, astaamaheeda ayaa ah in uu leeyahay giraan giraanta caadiga ah, waa xudunta sida xudunta u ah wareejinta xarigga caagga ah ee siligga daboolan, waa xudunta naxaasta xirmada balaastigga ah ee xirmooyinka kaladuwan ee kaladuwan ee intarnetka siday u kala horreeyaan waxay dejiyeen isugeyn koronto, qalabka guryaha caadiga ah ee korontada ku shaqeeya iyo isugeynta korantada.
Kaydka saliida YRB
Shaqada keydinta cadaadiska saliida ayaa ah in la yareeyo gariirka iyo buuqa howlgalka farsamada otomaatiga ah, loo badalo tamarta dareemayaasha ee ka dhalatay sheyga dhaqaaqa tamarta kuleylka loona sii daayo jawiga, iyo in si wax ku ool ah loo joojiyo shayga socda.
Waxaa loo adeegsaday daabulida saliida naaftada, gaasta, biyaha iyo warbaahinta kale.
Xiro iska caabin, gacan yar oo foorara, culeys fudud, dabacsanaan wanaagsan, iska caabin gabow, dib loo isticmaali karo
YZU matoor Vacuum
Aaladda koronto-dhaliyaha waa fure cusub, hufan, nadiif ah, dhaqaale iyo mid yar oo adeegsada il hawo cadaadis togan si ay u dhaliso cadaadis taban, taas oo ka dhigaysa mid aad u fudud oo ku habboon in la helo cadaadis taban halka ay ku jirto hawo la isku cadaadiyay ama ay labadaba togan iyo taban labadaba yihiin. looga baahan yahay nidaamka pneumatic. Matoorrada Vacuum waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa otomaatiyada warshadaha, sida mashiinnada, elektaroonigga, baakadaha, daabacaadda, caagagga iyo aaladaha robotikada.
Miirayaasha faakiyuumku waxay soo ururiyaan wasakhda (inta badan boodhka) laga soo qaado jawiga si looga hortago faddaraynta nidaamka waxaana loo isticmaalaa inta u dhexeysa koobka nuugista iyo matooriyaha faakuumka (ama vacuum valve). Mufflers waa in lagu dhejiyaa dekedda qiiqa ee matoorrada faaruqiyaha ah, dekedda nuugista (ama dekedda qiiqa) ee waalka faakiyuunka iyo dekedda qiiqa ee bamka faakiyuumka.
Vacuum chuck YZP
Faakiyuum nuugista, oo sidoo kale loo yaqaan faafiyaha faakiyuumka, waa mid ka mid ah qalabka kiciya qalabka faakiyuuga. Guud ahaan, isticmaalka waxyaabaha soo qabta koobabka faakiyuumka ayaa ah habka ugu jaban. Cabbitaannada caagga ah waxaa lagu shaqeyn karaa heerkul sarreeya. Cabbitaannada Silicone waxay aad ugu habboon yihiin qabashada alaabooyinka leh dusha sare. Koobabka ka-soo-baxa ee laga sameeyay polyurethane waa kuwo waara Intaa waxaa dheer, soo-saarka dhabta ah, haddii koobka nuugista looga baahan yahay inuu noqdo mid u adkaysta saliidda, waxaa loo qaadan karaa in la isticmaalo qalabka sida polyurethane, caagga nitrile butadiene, ama polymer ay ku jiraan vinyl si loo sameeyo koobka nuugista. iska ilaali dusha sare ee badeecada in la xoqay, doorashada ugu fiican waxaa laga sameeyaa caag nitrile ah ama silikoon caag ah oo leh walxaha wax nuugaya ee hooseeya waxaa laga sameeyaa caag nitrile ah, waxay leedahay xoog dillaac badan, sidaa darteed waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa qalabka nuugista faakiyuuga ee kala duwan.
Xakamaynta Pneumatic ee qaybaha muhiimka ah, hal dhinac oo loo xakameeyo jihada qaybaha. Badanaa waxaa loo qaabeeyaa inta u dhexeysa silsiladda iyo wiishka gadaal u rogaya, si hawada ku jirta silsiladdu aysan u dhex marin waalka gadaal looga soo baxo isla markaana wiishka si toos ah loo sii daayo.
Silsilad jiido caag ah sida magaca ka muuqata waa nooc ka mid ah silsilad jiidan. Sida waafaqsan qaab dhismeedka waxaa loo kala qaybin karaa silsiladda jiido caag ah iyo silsilad jiido caag ah oo gebi ahaanba xiran; Sida ku cad tusaalaha, waxaa loo qaybin karaa silsilad yar, silsilad guud iyo weyn Marka loo eego isku-dheellitirka buuqa waxaa loo qaybin karaa silsilad jiidan oo caadi ah iyo silsilad jiidan oo aamusnaan ah; Marka loo eego foomka waxaa loo qaybin karaa silsilad jiidan oo caadi ah, silsilad jiidan oo isbarbar socota, silsiladda jiidda ee nooca S; baakad asal ah iyo caag dib loo warshadeeyay, iwm.
Dhululubo cadaadis la saaray ayaa sidoo kale loo yaqaannaa dhululubo cadaadis-dareere ah
Cadaadiska cadaadiska waxaa lagu daraa faa'iidooyinka silsiladda iyo silsiladda iyo hagaajinta naqshadeynta, saliidda hidaha iyo go'doominta adag, hawo isdabajoog ah oo ku jirta xirmooyinka xirmooyinka bistoolada ka dib bilowga shaqada si toos ah, xawaaraha dhaqdhaqaaqa, xasilloonida, iyo qalabka xannibaadda gudbinta ee pneumatic waa mid fudud , Isku-hagaajinta wax soo saarku way fududahay, waxay ku guuleysan kartaa xoog sare oo ka mid ah saxaafadda hydraulic isla xaaladahaas, isticmaalka tamarta hooseeya, soo dejinta jilicsan ma ahan waxyeello caaryo ah, fududahay in la rakibo oo la rakibo silsiladda cadaadiska gaarka ah waxay noqon kartaa 360 darajo xagal kasta, booska la haysto waa cillad yar, hooseysa ee heerkulka kor u kaca, cimri dheer, buuq yar, iyo astaamo kale oo muhiim ah.